Sei emoticons isingaoneke pa iPhone yangu? Nhau dze iPhone
Sei maemoticons asiri kuratidza pa iPhone yangu?
Ignatius Room | 24/04/2022 12:00 | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Muchikamu chino tinokuratidza zvikonzero zve Sei emoticons isingaoneke pa iPhone?. Emoticons anga ari, kwemakore, iyo inokurumidza uye iri nyore nzira yekutaura manzwiro uye manzwiro kunyanya.
Nekusvika kweiyo memoji, Apple yakawedzera hunyanzvi hwe emojis, ichibvumira mushandisi gadzira tsika emoticons nechiso chako. Kana mudziyo wako wakamira kuratidza emojis kana usati wambove nesarudzo iyoyo, muchinyorwa chino tichakuratidza zvikonzero uye zvinogoneka mhinduro.
1 Emoticons isiri kuoneka pa iPhone yangu
1.1 mudziyo wekare
1.2 Mudziyo usina kuvandudza kune yazvino vhezheni
1.3 Iyo keyboard ye emojis yadzimwa
2 Maitiro ekuisa emoji keyboard pane iOS
3 Maitiro ekushandisa emoticons pa iPhone
4 Maitiro ekutsiva mazwi ne emojis muzvinyorwa pa iPhone
5 Maitiro ekushandisa emoticons paMac
6 Maitiro ekuwedzera kiibhodhi pa iPhone
7 Maitiro ekubvisa kiibhodhi pa iPhone
Emoticons isiri kuoneka pa iPhone yangu
Zvikonzero zvemubvunzo nei emoticons isingaonekwe pa iPhone zvakapfupikiswa mu3:
Mudziyo usina kuvandudza kune yazvino vhezheni
Iyo keyboard ye emojis yadzimwa
Apple yakaunza emojis neiyo iOS 5 kuburitswa, shanduro isina kusvika pa iPhone 3G. Kana mudziyo wako usingaratidzi kana kubvumidza kushandiswa kwe emojis, unotoziva chikonzero nei.
El iPhone 3G yakagara paIOS 4. Hazvigoneki kuti, nhasi, chero mushandisi achakwanisa kuenderera mberi nekushandisa ichi chishandiso.
Nekudaro, zvinokwanisika kuti zvishandiso zvinorova pamusika gare gare, hadzina kuvandudzwa kune shanduro itsva iyo yakatanga kusanganisira kutsigira emojis.
Nguva nenguva, Apple inosuma emojis nyowani kuburikidza nesoftware zvigadziriso. Kuti ugone kuona uye kushandisa ma emojis aya, zvinodikanwa kuti ugare uine yazvino vhezheni ye iOS yakaiswa.
Kwete chete kukwanisa kunakidzwa ne emojis, asi nekuti nenzira iyi, iPhone yedu ichagara yakachengetedzwa isati yasvika chero kusagadzikana kwaonekwa zvese musystem uye mumashandisirwo anoigadzira.
Kana mudziyo wedu ukagadziridzwa kune yazvino vhezheni uye emojis isingaonekwe chero kupi, dambudziko riri mu keyboard ye emojis.
Kana isu tisina emoji keyboard yakaiswa, hazvizoitike kuzvishandisa pamudziyo wedu. Mhinduro chete yekugadzirisa dambudziko iri kumisazve emoji keyboard pane iPhone.
Maitiro ekuisa emoji keyboard pane iOS
Para kuisa kiibhodhi, ingave iyo emojis kana yemumwe mutauro, isu tinofanirwa kuita nhanho dzandinokuratidza pazasi:
Isu tinopinda iyo Zvirongwa yemudziyo wedu kuburikidza nechidzitiro chekumba.
Tevere, tinya pane Yekhibhodi > Teclados
Dzvanya pa Wedzera khibhodi nyowani.
Muchinyorwa, tinotarisa Emoji wobva wadzvanya pairi kuti uise.
Para isa kiibhodhi mune mimwe mitauro, tinofanira kuita matanho akafanana.
Maitiro ekushandisa emoticons pa iPhone
Kana tangoisa iyo emoji keyboard pa iPhone, kana isu tasvika iyo keyboard, emoticon icon inoratidzwa pachiratidziri. pakona yekuruboshwe yekibhodhi.
Kudzvanya pairi kucharatidza ese ari maviri personalized memoji izvo zvatakagadzira, pamwe nekuunganidzwa kwese kwe emojis kunosanganisirwa mushanduro yeIOS yatakaisa.
Asi, kana mukuwedzera kune kiibhodhi muSpanish uye emojis, isu takaisa kiyibhodhi mune mimwe mitauro, chiratidzo chinotipa mukana kune emoticons. iri kurudyi kwebhatani izvo zvinotipa mukana kune ese ari maviri manhamba uye akakosha mavara.
Kana tikadzvanya pa pasi rose, keyboard inoratidzwa mukona yezasi yekuruboshwe, makiyibhodhi achachinja pakati pevose vakaiswa. Kana tikaichengeta yakadzvanywa, kudonhedza pasi kucharatidzwa nemakibhodhi ese akaiswa.
Maitiro ekutsiva mazwi ne emojis muzvinyorwa pa iPhone
Sezvatinonyora mune chero app, iOS otomatiki inopa emoji yakavakirwa pazwi zvatakanyora muchirongwa chezano. Kana isu tichida kushandisa iyo emoji, isu tinofanirwa kungodzvanya pairi uye izwi rinotsiviwa neiyo emoji.
Kana isu tine rombo rakanaka kuti denderedzwa redu reshamwari rinoshandisa Apple's messaging platform, Mharidzo, isu hatifanirwe kudzvanya maemoticons anoratidzwa nekhibhodi, sezvo application yacho inotitendera chinja mazwi ne emojis.
Kana isu tichida kutora mukana wekuita uku kweMeseji application, isu tinofanirwa kuita matanho andinokuratidza pazasi:
Tinonyora zvinyorwa muhurukuro yatakatogadzira kana kugadzira imwe itsva.
Ipapo takachinjira ku emoji keyboard nekudzvanya pachiratidzo chinovamiririra.
Tevere, mudziyo wedu uchaparura mazwi ese muzvinyorwa uye achatiratidza mazwi eorenji vane emoji yavo inoenderana.
Nekudzvanya pamazwi eorenji, isu tichangoerekana tatsiva izwi ne emoji inoenderana.
Maitiro ekushandisa emoticons paMac
Apple inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi veMacOS, liwo akafanana akateedzana emoticons anowanikwa paIOS, kusanganisira shanduro dzakasiyana maererano nemuvara weganda.
Kana iwe uri kushandisa yazvino vhezheni yeMacOS, unogona kushandisa iwo emoticons akafanana anowanikwa mune yazvino vhezheni ye iOS iripo. Kana zvisina kudaro, unogona kushandisa cheteos iyo Apple yakaunza mushanduro yauri kushandisa.
Kusiyana neIOS, kana tichida kuwana emojis, isu hatigone kuchinja keyboard, asi isu tinofanirwa, kuti tiwane, tinofanirwa kushandisa nzira yekudimbudzira yekhibhodi kubva panzvimbo yecursor apo tinoda kuwedzera emoticon.
Kana tangoisa chitubu kwatinoda kuisa imwe kana akawanda emoticons, isu tichadzvanya makiyi Kudzora + Raira ⌘ + Spacebar. Nekudzvanya pane imwe neimwe yadzo, ivo vanozoratidzwa mune zvinyorwa.
Neiyi nzira yekudimbudzira, isu tinogona zvakare kunyora pictograms, unyanzvi zviratidzo, mabara, mureza zviratidzo uye zviratidzo like ⌘ ⎋ ⏎ ⎆ ⎉ ⍶ ► ◻︎ ® ☎︎
Maitiro ekuwedzera kiibhodhi pa iPhone
Muchinyorwa, tinotarisa zita remutauro watinoda kuisa sekibhodhi wobva wadzvanya pairi kuti uise.
Maitiro ekubvisa kiibhodhi pa iPhone
Isu tinopinda iyo Zvirongwa pa iPhone kubva pachiratidziro chekumba.
Tinonanga kumenyu General.
Kubvisa kiibhodhi tinoitsvedza kuenda kuruboshwe uye tinya pa Bvisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Sei maemoticons asiri kuratidza pa iPhone yangu?
iOS inowedzera chikamu chayo chemusika vs Android inodonha